न्यू मिलेनियम कलेजले एउटा उचाई प्राप्त गरिसकेको छ : कमल सापकोटा ( प्रिन्सिपल) – Education Rays
Home / Interview / न्यू मिलेनियम कलेजले एउटा उचाई प्राप्त गरिसकेको छ : कमल सापकोटा ( प्रिन्सिपल)
न्यू मिलेनियम कलेजले एउटा उचाई प्राप्त गरिसकेको छ : कमल सापकोटा ( प्रिन्सिपल)
June 26, 2015	Interview Leaveacomment
प्रिन्सिपल न्यू मिलेनियम कलेज
प्रश्न : न्यू मिलेनियम कलेजको पृष्ठभूमि र परिचय बताइदिनुहोस् न ?
कमल सापकोटा ः विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यो कलेज लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षाविद्हरुबाट प्रवद्र्धित छ । चक्रपथकै किनारमा भएकोले काठमाडौं उपत्यकाकै जुनसुकै ठाउँबाट पनि आवतजावत गर्न पायक पर्ने स्थानमा न्यू मिलेनियम सञ्चालित रहेको छ । यसले शिक्षाक्षेत्रमा एउटा उचाइ प्राप्त गरिसकेको छ ।
प्रश्न: कलेजको नाम न्यू मिलेनियम किन राख्नुभयो त ?
कमल सापकोटा ः वास्तवमै यसको नामाकरणका पछाडि एक कारण छ । केही साथीहरु कतै मिलेनियम नामको कलेज फुटेर न्यू मिलेनियम भएको हो कि प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ । तर सन् २००० मा स्थापना भएको र अब नयाँ सताब्दि सुरु भयो र कलेजहरुले पनि नयाँ सताब्दिकाे आवश्यकता र वातावरण अनुरुप शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सोचका अनुसार याे कलेजको नाम न्यू मिलेनियम राखिएको हो ।
प्रश्न: कलेजका विशेषताका बारेमा बताइदिनुस् न ?
कमल सापकोटा ः अनुशासित वातावरणमा पढाइ हुने, सशक्त, चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन, वर्षौदेखिका अनुभवी शिक्षकहरुले we don’t educateachild by telling what he knows not, but by making what he was not. सिद्धान्तमा आधारित रहेण हामी शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गर्छौं । साथै हामी शिक्षण प्रक्रियाले मानसिक र भौतिक रुपमा व्यक्तित्व विकास हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई अनुसरण गर्दै आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदछौं ।
प्रश्न: यस कलेजमा कुन कुन विषयको पढाइ हुन्छ त ?
कमल सापकोटा ः यसमा प्लस २ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायको पढाइ हुन्छ । स्नातक तर्फ व्यवस्थापन संकाय र स्नातकोत्तर तर्फ मानवीकि संकायको अंग्रेजी विषयको पढाइ हुन्छ ।
प्रश्न: विद्यार्थीहरु प्लस २ मा आकर्षित हुने विषयहरु के के छन् ?
कमल सापकोटा ः यसमा धेरै विद्यार्थीहरुले रुचाएको विषयहरु चाहिँ आमसञ्चार र पत्रकारिता नै हो । त्यसका अलावा समाजशास्त्र, ऐच्छिक अंग्रेजीजस्ता विषयमा पनि विद्यार्थीहरुको आकर्षण देखिएको छ ।
एजुकेशन रे ः कलेजको भौतिक पूर्वाधारका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
कमल सापकोटा ः भौतिक पूर्वाधारको सवालमा डेस्क बेन्चदेखि विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय सबै सुविधासम्पन्न छन् । हाम्रा प्रयोगात्मक कक्षाहरुमा व्यक्तिगतरुपमा सबै विद्यार्थीले छुट्टाछुट्टै प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाएका छौं । आमसञ्चार र पत्रकारिताका लागि पनि हामीले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु, एफएम स्टेशनहरुसँग सम्झौता गरी प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
प्रश्न: कलेजहरुको भीडमा न्यू मिलेनियम कलेज के कुरामा फरक छ ?
कमल सापकोटा ः पहिलो कुरा त यस कलेजको व्यवस्थापन समूह नै शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ । विद्यार्थीलाई तर्साएर, थर्काएर भन्दा पनि भित्री मनमा महसुस गराउनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं । विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङका माध्यमबाट सचेत नागरिक बन्न प्रेरित गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।
प्रश्न: अन्त्यमा हामी मार्फत भन्नुपर्ने केही कुरा छन् कि ?
कमल सापकोटा ः अहिले महाभूकम्पका कारण त्रसित विद्यार्थी तथा अभिभावकका माझ हाम्रो कलेजको भवन, नौ रोपनीमा फैलिएको कलेज परिसर, गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा अनुगमन गरेर, निरीक्षण गरेर ढुक्क भई विद्यार्थीहरुलाई न्यू मिलेनियम कलेजमै भर्ना गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।